लकडाउन कहिलेसम्म ? सरकारी सूत्र भन्छ- भारततिर हेर्नुपर्छ – Sudarshan Khabar
मुलुकलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन सरकारले दोस्रोचोटि घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि मंगलबार -चैत २५ गते) सकिँदैछ । तर, सरकारले अहिलेसम्म मंगलबारपछि लकडाउनको अवधि बढाउने/नबढाउने बारे अहिलेसम्म सूचना दिएको छैन ।
भारतमा वैशाख २ सम्म लकडाउन
भारत सरकारले अपि्रल १४ अर्थात आगामी बैशाख २ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ । बैशाख २ पछि के गर्ने भन्नेबारे मोदी प्रशासन अहिलेसम्म गृहकार्यमै छ ।
यसैवीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विहीबार सबै राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुसँग बैठक गरेका थिए, जसमा अपि्रल १४ पछि के गर्ने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
मोदीसँगको छलफलपछि अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रेमा खाँडूले यस्तो टि्वट गरेका थिए, ‘१५ अपि्रलमा लकडाउन समाप्त हुनेछ । तर, यसको मतलब यो होइन कि तपाई गल्लीमा खुल्लामखुल्ला घुम्न पाउनुहुनेछ । हामीले कोरोनाको संक्रमण कम गर्नका लागि निरन्तर प्रयास गर्न जरुरी छ । लकडाउन र सोसल डिस्ट्यान्सिङ नै यसलाई समाधान गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ।’
मुख्यमन्त्री खाँडूले केहीबेरमै टि्वट डिलिट गरे । तर, उनको यही भनाइलाई आधार बनाउँदै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले भनेका छन् कि अपि्रल १५पछि भारतमा लकडाउन हट्न पनि सक्छ, तर केही निश्चत सर्तहरुका साथ । परिस्थितिमा सुधार नआएको अवस्थामा भारतको लकडाउन अरु लम्बिन पनि सक्छ ।
यसैवीच भारत सरकारले १४ अपि्रलसम्म लकडाउन घोषणा गरे पनि एयर इण्डियाले अपि्रल ३० तारेखसम्मको टिकट बुकिङ बन्द गरेको छ ।
नेपालमा के होला ?
भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको नेपालमा चैत २५ पछि के गर्ने भन्ने प्रश्न निररुत्तरित छ । यसका लागि सरकारसँग करिब तीनवटा विकल्प देखिन्छन् :
एक- भारतमा लकडाउन जारी रहे पनि नेपालमा खोल्ने ।
दुई- भारतले जहिलेसम्म लकडाउन गर्छ, त्यसैलाई पछ्याइरहने ।
तीन- भारतले जे गरे पनि चैत २५ देखि सर्तसहित खुल्ला गर्ने ।
लकडाउन खोल्ने कि जारी राख्ने भन्ने कुरा छिमेकीको भन्दा पनि आफ्नै देशभित्रको अवस्थालाई विचार गरेर निर्णय लिनु बुद्धिमत्ता हुने देखिन्छ ।
कोरोना फैलन नदिने सरकारले जसरी लकडाउनको घोषणा गर्‍यो, त्यसले गर्दा भाइरस फैलन नपाएको भन्दै आम जनसमुदायले सरकारको अहिलेसम्मको निर्णयलाई साथ दिएका छन् । तर, लामो समयको लकडाउनले जनजीवनमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ ।
तर, अर्कोतिर लकडाउनलाई खुल्ला गर्दा कोरोनाको महामारी समदायमा फैलिएला कि भन्ने जोखिम नि हटिसकेको अवस्था छैन । इरान, इटली र अमेरिकामा हेलचेक्र्याइँ गर्दा ठूलो दुर्घटना निम्तिएको अवस्था छ ।
भारतको तयारीलाई हेदा त्यहाँ निश्चित सर्तहरु राखेर लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने विषयमा छलफल भइरहेको देखिन्छ । तर, वैशाख २ सम्म सिंगो देश लकडाउनमै रहनेछ । किनभने, भारतमा कोरोना इम्पोर्टेडबाट समुदायमा प्रवेश गर्न थालेको अवस्था छ ।
नेपाल सरकारले चाहिँ अब २५ गतेपछि के गर्ला त ? चैत महिनाभरि लकडाउनको निरन्तरता ? वा सर्तसहितको खुकुलो ? अहिलेसम्म सरकार अन्योलमा छ ।
प्रकाशित भएको : April 4th, 2020